Kuqwalwa iNgome kuhanjwa ezinyathelweni zeNkosi uBhambatha - Bayede News
Home » Kuqwalwa iNgome kuhanjwa ezinyathelweni zeNkosi uBhambatha
Isabelomali: Abayi nganxanye ngesithebe sikaMboweni
Lo mkhankaso akukhona ukuqwala nje kuphela kepha kuyisifundo somlando nobuholi nokuthwasisana ngokwengqondo
Umlando weNkosi uMbambatha (abanye bathi uMbambada) ungohlabahlosile nokho unezifundiso ezinqala. Esinye isifundo nje ngesokuthembeka emphakathini nokuba yingxenye yenkonzo yesizwe. Umfo kaZondi nesizukulwane sakhe benza okwanyakazisa umhlaba mhla bebhekana nohulumeni wamadlagusha mahlanze. Zabe zikhona izinsizwa ezindala oSigananda wakwaShezi noChakijana, usukuma bekhuluma, uSomangase nabanye. Baphila futhi bakholwa yiNgonyama uDinuzulu, uSifuba singungu singungubele nyakana sabhoboka ubuntu uyozizwa izindaba.
Yilo mlando ohehe isizukulwane saboHlanga ngaphansi kwenhlangano iBantu Hikers, okuyiqoqo lezifundiswa elilethela okokuqala isizukulwane sabafundi imipilonhle, ukuxhumana nenkundla yokuthwasiswa ngokwengqondo. Leli butho ngomhla ziyisi-7 kuLwezi lizobe liqwala endaweni lapho kwabe kunyathela khona iNkosi uMbambatha eNgome.
Ekhuluma nelaboHlanga omunye wamagqugquzeli u-Advocate uSandile Kuboni uthe lokhu akukhona ukuqwala nje kuphela kepha yisifundo somlando nobuholi.
“Iqembu iBantu Hikers lisebenzisa ukuqwala njengesingathekiso sobuholi kuwena luqobo. Sikholelwa ekutheni ukuzibambela mathupha kuyindlela enamandla yokubumba umbono womuntu ngomhlaba kubuye kuthinte ezindaweni ezinikeza ithuba kumuntu ukuze asabalalise umqondo wakhe ajule. Ukuhamba kuyindlela yokubumba ukubona kwakho umhlaba,” kusho u-Advocate Kuboni.
Uqhube wathi: “INkosi uBhambatha elinye lamaqhawe elakhombisa ukuzibophezela okuphelele emzabalazweni wokuphucwa izwe lapho kwakunezingqinamba ezijulile futhi kunobunzima. Wayewaqonda amandla obumbano ekulweni nokungesibo ubulungiswa. Wababutha abantu ukuba babhekane nokubuswa ngobukoloni. Abantu bendawo babuthwa bamelana futhi bazilungiselela okwakubonakala ukuthi kungegwemeke okuwukungqubuzana namagumgedlela. Wayebambelela, enesibindi, ezinikela futhi ebekezela,” kusho yena.
Abasunguli baleli butho zimfundimane uqobo. Kukhona uMpho Sekwela oyisifundiswa saseWits nase-University of Cape Town kanti futhi uyiMandela Washington Fellow (2017). Ukhona noKhanya Sosibo yena oyisifundiswa sase-University of KwaZulu-Natal naseGIBS ubuye abe kwezokusakaza. Kukhona noSizakele Sibanda oyisifundiswa sase-University of Cape Town, uyiMarine Biologist.
Abaqwali bazoba nethuba lokuba bavuselele ukwazana nelinye lamaqhawe amadala lase-Afrika. Kuzoba yithuba lokuba bakhe ubudlelwane ngale kwethuna. Kuzoba yithuba lokuba bathole ugqozi lobuhlakani, ukuzinikela kanye nesinyathelo sokungaguquki esathathwa yiNkosi uBhambatha sokuvikela ukungahambisani kwamalungelo abantu bayo.
“Sethemba ukuthi abaqwali bazothola izifundo kulesi sigomagoma esiyindodana yezwe eyabhekana nezinye zezimpi ezinamandla ukulwa iphikisane nokubuswa izifiki. Sethemba ukuthi abaqwali bazofunda ukuthi izithiyo akufanele zikuvimbe zishabalalise amaphupho nentshisekelo yenu,” kuphetha u-Advocate uKuboni.
Kafushane ngaleli butho
Iqembu iBantu Hikers; liyinhlangano engenzi nzuzo elaqanjwa ngokubambisana ngowezi-2015, elilethela isizukulwane sokokuqala sabafundi imipilonhle, ukuxhumana nenkundla yokuthwasiswa ngokwengqondo ngenhloso yokunciphisa ukungaphumeleli okukhulu bese kuba nokuswelakala kokuthola imisebenzi. IBantu Hikers yakhiwa ngoba kubonakala imiphumela eyilezi zibalo “bangama-18% kuphela abafundi bakamatikuletsheni eNingizimu Afrika abangena emanyuvesi futhi kulabo bafundi bangama-60% asalayo onyakeni wabo wokuqala” futhi izizathu zalokho aziphathelene nobunzima kwezezimali.